Fitadiavana Seminera Site Guide To WordPress Mba Handinika
Ny fanombohana tranokala no fomba tsara indrindra sy mora indrindra hizarana ny eritreritrao, ny hevitrao, ny fahaizanao ary ny fitantanana ny raharahanao manerana izao tontolo izao. Ary raha te-hanangona vola an-tserasera ianao dia azonao atao ny manangana tranokala WordPress. Soa ihany fa ny fanaovana tranonkala dia mora satria WordPress dia tsy mitaky anao hanana ny fahaiza-manao coding toy ny CSS, PHP, ary HTML. Na dia tsy nampiasa WordPress aloha aza ianao dia afaka manandrana izany ary manamboatra tranokala fandraisana an-tsokosoko. Mankanesa any amin'ireo toro-hevitra nomen'i Michael Brown, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt .
Dingana 1: Fametrahana:
Ny iray amin'ireo fahadisoana goavana nataon'ireo mpandimby dia rehefa mamorona vohikala dia mifidy ny rafitra fitantanana tsy ara-dalàna. Soa ihany fa afaka miantehitra amin'ny WordPress ianao izao ho tranonkala 95%, ary ny bilaogy ao amin'ny aterineto dia novolavolaina miaraka amin'izany. Afaka mametraka mora foana ny plugins ianao, manamboatra ny endrika sy ny fametrahana ny tranonkalanao, manova ny lohahevitra, manaova zavatra mifandraika amin'ny marika, ary manova ny loko. Wordpress.com dia toerana izay ahafahanao mamorona tranonkala iray tsy misy trano ary afaka mampiasa izany amin'ny serveteranao manokana, ary wordpress.org dia sehatra izay ahafahan'ny mpampiasa mamorona tranonkala ho azon'izy ireo ary tsy afaka mamindra azy ireo amin'ny servers mandra-pandoany tsy hividy ny sarany . Ny zavatra voalohany ilainao dia ny anaran'ny sehatra sy ny tranonkala fampiantranoana. Ny anaran'ny anaranao dia tokony hamaritra ny marikao, ary ny serivisy tranonkala fampiantranoana toy ny GoDaddy dia hanome anao zavatra ho an'ny serivisy sy ny fampiantranoana. Bluehost dia tena ankasitrahana raha te hahazo solosaina fampiantranoana fampiantranoana WordPress. Farany dia tsy maintsy ampidirinao ny fampahalalana momba ny kaontiny ary hamaranana ny fonosanao mba hamenoana ny fananganana.
Dingana 2: Mametraka WordPress:
Ao amin'ny kilasinao dia afaka mahita tranga sy singa hafa kely ianao..Mety ho diso hevitra ianao, saingy ny 96% amin'izy ireo dia tokony tsy hiraharaha. Tsy maintsy mandeha any amin'ny tranokala Bluehost Marketplace Quick Install ianao ary hametraka WordPress eo. Ny fametrahana haingana dia hanomboka ary haka segondra vitsivitsy amin'ny fametrahana ny tranokalanao WordPress. Ity tsena ity dia mety hanosika anao hijery ireo lohahevitra WordPress sasany, saingy tsy mila misafidy izany ianao amin'ity dingana ity. Raha vantany vao tafapetraka ny WordPress, dia hahazo ny anarana sy ny tenimiafina ao amin'ny ID mailanao.
Dingana 3: Fidio ny WordPress Theme:
Ny dingana fahatelo dia ny misafidy ny fisehoana ivelany amin'ny tranokalan'ny orinasa. Noho izany dia tokony hifidy loha-hevitra avy amin'ny lahatahiry amin'ny Wordpress lehibe ianao. Ny sasany amin'ireo lohahevitra dia mamaly, ary ny hafa dia tsy mamaly. Tsindrio ny endrik'ity »bokotra an-tsary ity ary ampio lohateny vaovao ho an'ny tranokalan'ny orinasa. Ny fijerena ny lohahevitra mifototra amin'ny zavatra takinao dia mora. Azonao atao ihany koa ny manova ny sehatry ny sakafo, ny toerana misy azy, ary ny loko.
Dingana 4: Mamorona ny lahatsoratra voalohany:
Rehefa mametraka foto-kevitra ianao dia vonona ny hamorona ny lahatsoratra voalohany. Ataovy azo antoka fa manana tranonkala maimaim-poana ny tranokala mba hahafahan'ireo mpanjifanao mahazo ny vokatra sy ny vokatrao. Mandehana any amin'ny hafatra »Add new section amin'ny tiro kely WordPress ary manorata tantara iray miavaka izay ahafahan'ny mpamaky bebe kokoa. Mandritra izany fotoana izany, aza adino ny mametraka sokajy sy marika ao amin'ny tranonkalanao.
Dingana 5: Plugins sy fanamafisam-peo:
Raha vao nanoratra sy namoaka lahatsoratra na tranonkala ianao, dia mety te-hifandray aminay, politika, ary safidy hafa. Azonao atao ihany koa ny mametraka plugins sasany mba ahafahanao manitsy ny galleries sy ny sary anao. Ny Customization no fanalahidin'ny tranonkala mahomby ao amin'ny WordPress, noho izany dia tsy tokony hohadinoinao ny hanatsara sy hampifanaraka ny votoatin'ny tranonkala.
Dingana 6: Manaova vola avy amin'ny tranokalanao:
Ankehitriny dia efa vonona ny tranokalanao ary nosoratanao ny lahatsoratra voalohany, tokony ho vonona ny hanangona vola an-tserasera ianao. Misy fomba maro ahazoana vola amin'ny aterineto. Afaka mahazo kaonty AdSense ianao na mivarotra zavatra amin'ny alàlan'ny tranonkalanao. Azonao atao, ohatra, afaka mivarotra tranokala na fiara lafo vidy ety anaty aterineto ianao ary mandray mpanjifa maherin'ny maro manerantany. Raha toa ianao ka mametraka ny ezaka sy ny asa mafy, dia handray tsara ny valisoa avy amin'ny orinasa an-tserasera ianao Source .